မျက်လုံး မှိတ်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » မျက်လုံး မှိတ်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ…။	27
Posted by black chaw on Jul 30, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary | 27 comments
ကျွန်တော့် အဖေ က အခြားအဆင့် စစ်သားကြီး တစ်ယောက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမ တွေ ကလည်း အဖေ တာဝန်ကျရာ တပ်တွေလိုက်ပြောင်းပြီး
ကျွန်တော့်ကို ပုသိမ် ကင်မလင်းကျွန်းမှာ မွေးပါသည်…။
ကျောင်းစတက်တဲ့ အချိန်အထိ ပုသိမ်မှာပဲ နေခဲ့ရပါ၏…။
သူငယ်တန်း နှစ်ဝက်လောက်မှာ အဖေ တပ်ပြောင်းရပါသည်…။
ခ.လ.ရ (၈၀) အင်းမမြို့ ကိုပါ…။
အဖေ နဲ့ အမေ က အင်းမ တပ်ကို အရင်သွားနှင့်ကြပြီး
ကျွန်တော် က အမေ့အစ်ကို အိမ်ရှိတဲ့ ကြည့်မြင်တိုင် သာဓုလမ်းထဲက
အ.မ.က ကျောင်း မှာ သူငယ်တန်း ဆက်တက်ပါသည်…။
သူငယ်တန်းအောင်တော့မှ အင်းမကို လိုက်ပြောင်းပြီး
တပ်တွင်းအ.မ.က မှာ ပထမတန်း စတက်ပါသည်…။
ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမ ၄ ယောက်…။
ယောက်ျားလေး ၂ ယောက်…၊ မိန်းကလေး ၂ ယောက်…။
အဖေ ရယ် အမေရယ် ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမ ၄ ယောက်ရယ်
မိသားစု ၆ ယောက်ရဲ့ စားအိုးက သေးလှတယ်တော့ မဟုတ်ပါ…။
ဒီကြားထဲ အစ်ကို နဲ့ အစ်မငယ်ကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မှာ ကျောင်းထားရတဲ့
စားရိတ်ပါပေါင်းလိုက်လျှင် အဖေ ထမ်းရသော ၀န်က လေးလံလွန်းလှပါသည်။
ဒုအရာခံဗိုလ် တစ်ယောက်ရဲ့ လစာလေး နဲ့ လောက်ငှအောင် စားရင်း
ကုန်စုံဆိုင်မှာ အငယ်ဆုံး ကျွန်တော်က မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ အကြွေးယူရတဲ့
ဘဲဥဟင်းချက်ရင် တစ်ယောက် တစ်ခြမ်း…။
အစ်မကြီးဖြစ်သူက အနှစ် ကို ကြိုက်သည်…။
ကျွန်တော်က အကာ ကို ကြိုက်သည်…။
မောင်နှမ နှစ်ယောက် ဘဲဥဟင်းချက်ရင် ကျွန်တော်က အကာ
အကျယ်အကျယ် အငြင်းပွားစရာ မလို…။
မနက်ခင်းတွေတိုင်းမှာ ကျွန်တော်က အိမ်ရဲ့ ဈေးအ၀ယ်တော်…။
ကျွန်တော့် လက်ထဲမှာ ဈေးခြင်းလေး ကိုင်ပြီး လက်ထဲမှာ ပါတာက
ကျပ်တန်နွမ်းနွမ်း လေး နှစ်ရွက်…။
အမဲသား တစ်ပိသာ ၁၂ ကျပ်…ဈေး…။
အမဲသားသည် ဆီက အမဲသား ၁၀ ကျပ်သား ၁ ကျပ် ပြား ၂၀ ဖိုး ၀ယ်ဖို့
ကျန်တဲ့ ပြား ၈၀ က အားလူး…ငပိရည် နှင့် တို့စရာ ၀ယ်ရန်…။
ဒါ…ကျွန်တော့် ရဲ့ မနက်ခင်း တိုင်း နီးပါး ထမ်းဆောင်ရတဲ့ တာဝန်…။
ဈေးက ပြန်လာရင် ၇ နာရီ ၁၅ ခန့် ရှိပြီ…။
အိမ်နောက်က အုတ်ကန်မှာ တပ်ရင်း ရေစက်က ရေလာပြီ…။
ပုံး ကိုယ်စီဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ရေခံကြသည်…။
အိမ်က တိုင်ကီ ရေပြည့်လျှင် ရေကပိတ်သွားပြီ…။
အစ်မကြီး တို့ မိန်းကလေးတွေ ရေချိုးဖို့ ကျွန်တော်တို့က ငဲ့ညှာရပါသည်…။
တပ်ရင်းရုံး အုတ်ကန်မှာ ရေ အလွန်ပေါပါသည်…။
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ မနီးမဝေးလေးမှာ ရှိနေတဲ့
တပ်ရင်းရုံးအုတ်ကန်မှာပဲ ရေသွားချိုး ကြပါသည်။
ရေချိုးပြီး ကျောင်းဝတ်စုံ ၀တ်…၊ အမေ ကြော်ပေးသည့်
ထမင်းကြမ်းကြော် ကို ရေနွေးကြမ်းဖြင့် မျှောချ…။
အဲဒီတုန်းက ကော်ဖီမစ် ဆိုတာ မပေါ်သေးပါ…။
ရိက္ခာရသည့် အချိုခြောက်နှင့် လဖက်ရည်လေးတော့
တစ်လ တစ်ခါ လောက်တော့ သောက်ရပါသည် ခင်ဗျား…။
အမေထည့်ပေးသည့် ထမင်းချိုင့် လေး ဆွဲ…လွယ်အိတ်လေး လွယ်ပြီး
ကျောင်းကားရပ်မည့် တပ်ရင်းဆေးခန်း နားမှာ ကျောင်းကားစောင့်…။
ဒါက ကျွန်တော့် ရဲ့ ငယ်ဘ၀ နံနက်ခင်းပါ ဗျာ…။
ကျောင်းက တပ်နှင့် ၂ မိုင်ခန့်ဝေးသော အင်းမမြို့မှာ တည်ရှိပါသည်။
ညနေ ၃ နာရီ ကျောင်းဆင်းလျှင် တပ်မှ လာကြိုပေးသော ကျောင်းကားဖြင့်
အိမ်ရောက်သည်နှင့် အ၀တ်အစားလဲ ပြီး
ဘောလုံး သို့မဟုတ် ဘော်လီဘော တစ်ခုခုတော့ အမြဲ ကစားဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ အင်းမမြို့မှာ အဲဒီတုန်းက တပ်ရင်း ၃ ရင်း ရှိပါသည်။
ခ.မ.ရ (၄)…၊ ခ.မ.ရ (၅)…၊ ခ.လ.ရ (၈၀)…။
တစ်တပ် နှင့် တစ်တပ် ဘောလုံး ချိန်းကန်ကြ…ရတာ အတော်ပျော်စရာ ကောင်းခဲ့ပါသည်။
ဘောလုံးကန် ရေမိုးချိုးပြီး သည်နှင့် မိသားစု ထမင်းဝိုင်း…။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ် က ထမင်းကို မိသားစု အားလုံး တပြိုင်တည်းသာ
တပြိုင်တည်း စားမှလည်း အဆင်ပြေနိုင်မည့် အခြေအနေမျိုး ကြောင့်လည်း ဖြစ်မည်…။
ထမင်းစားပြီး ခဏတဖြုတ် နားပြီး စာကျက်ရပါသည်။
အနည်းဆုံးတော့ ၄၅ မိနစ်လောက် ၇ အိမ်ကြား ၈ အိမ်ကြား
အသံပြဲ ကြီးဖြင့် အော်ကျက်လိုက်လျှင် အဖေ နဲ့ အမေ ကျေနပ်သွားပြီ…။
၈ နာရီ လောက်ဆို တပ်ရင်း တီဗီရုံမှာ သတင်းနားထောင်ပါသည်…။
သတင်းအပြီး မှာ အစီအစဉ်ကောင်းလျှင်လည်း ဆက်ကြည့်လို့ ရပါသည်…။
Hard To Hard တို့ Six Million Dollars Man တို့ Bionic Woman တို့
Little House on The Prairie (စာလုံးပေါင်းမှားရင် ဆောရီး)
တို့လို ဇာတ်လမ်းတွဲများ နှင့်
ဗုဒ္ဓဟူးညများတွင် အငြိမ့် အစီအစဉ်…။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ဘ၀ ရဲ့ တစ်နေ့တာ အစီအစဉ် က ဒါပါပဲဗျာ…။
ဖျော်ဖြေရေး ဆိုတာကလည်း တပ်ရင်းတီဗီရုံ မှာ ပြတဲ့ မြန်မာ့ရုပ်သံ တစ်ခုတည်း…။
တစ်လ တစ်ခါလောက်တော့ နယ်လှည့်ဆက်ဆံရေးတပ်က လာပြတဲ့
ပြောစရာ တစ်ခု ကျန်သွားပါတယ်…။
အဲဒါကလည်း အတော် အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စပါ…။
တပ်ရင်းမှူး က (ဗိုလ်မှူးကြီး အမ်မ်ဇော်ယော ထင်ပါရဲ့)
တပ်ထဲက မိသားစုတွေဆီက စာအုပ်တွေ အလှူခံပြီး
လစဉ်ထုတ် စာအုပ်တွေကိုလည်း ပုံမှန်ဝယ်ထည့်ပေးထားတော့
ကျွန်တော့် အကြိုက်ပါပဲ ခင်ဗျာ…။
ပေဖူးလွှာ…၊ သွေးသောက်…၊ မြ၀တီ…၊ ငွေတာရီ…၊ သပြေ…၊ စာပေလုပ်သား…၊
ရုပ်ရှင်မျက်မှန် မဂ္ဂဇင်း တွေကို ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က လစဉ်ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်ဗျာ…။
စာကြည့်တိုက် မှူး လို့ ပြောရမယ့် သူက ကျွန်တော့် ကို အလွန်ချစ်ပါသည်။
အစ်မကြီး မျက်နှာလည်း ပါပါတယ် ခင်ဗျာ…။
မဂ္ဂဇင်းတွေ ၀ယ်လာပြီ ဆိုရင်… ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမ က အရင်ဖတ်ခွင့်ရပါသည်။
ကျောင်းကအပြန် မဂ္ဂဇင်း အသစ်များ အိမ်မှာတွေ့ရတဲ့ အရသာက
ဘာနှင့်မှ လဲနိုင်လိမ့်မည် မထင်ပါ…။
အခု ပြန်ရေးနေရင်းတောင် လွမ်းမိပါတယ်ခင်ဗျာ…။
၂ ရက် ၃ ရက်လောက် စိမ်ပြေနပြေ ဖတ်ပြီးမှ
စာကြည့်တိုက် ကို စာအုပ်ရောက်ပါသည်…။
စာကြည့်တိုက် နဲ့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ရင်းနှီးခဲ့တာပါဗျာ…။
ရန်ကုန်ရောက်တော့လည်း အစ်မ အငယ်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဗဟို စာကြည့်တိုက်မှာ
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဗဟိုစာကြည့်တိုက်ကို အမြဲရောက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါဗျာ…။
အခု အထိလည်း အားသည့်အချိန် စာကြည့်တိုက်ထဲသွားပြီး
ဟိုစာအုပ်ရှာ ဒီစာအုပ်ရှာ လုပ်နေတုန်းပါ…။
ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာတော့ စာကြည့်တိုက်မှာ ရှိတဲ့ စားပွဲတင် တင်းနစ်စ် ရိုက်ကြပါသည်။
တခါတလေ အိမ်နီးခြင်း အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက် နှင့် စစ်တုရင် ထိုး…။
တခါတလေ တပ်ရင်း UA ကြီး တို့နှင့် Scrabble ၀င်ကစား…။
ငယ်ငယ်က စစ်တုရင် လည်းစွဲဖူးပါတယ်…။
Scrabble လည်း စွဲဖူးပါတယ်ဗျာ…။
မြစပဲရိုး says: ကိုချော စာလေး တွေ မဖတ်ရတာကြာပေါ့။
ဈေးတွေ မှတ်မိနေသေးတာ အံ့ရော။
ကျွန်မ တော့ အဲဒီတုန်းက ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ သိပ်မမှတ်မိချင်တော့ဘူး။
အဖွားပြောတဲ့ သူတို့ခေတ်က ဆီတစ်ပုံး ၃မူး ဆိုတာဘဲ မှတ်မိတော့တယ်။
မျက်စိမှိတ် ဖတ်ပြီး အရုပ်ထင် ကြည့်သွားပါတယ်။
BTW – မိဘ ရဲ့ လမ်းရိုး ဝန်ထမ်း ကနေ ဖောက်ထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း နဲ့ ရပ်တည်ပြီး အောင်မြင်နေ တဲ့ သူ လက်တွေ့သမား တစ်ယောက် ဒီမှာ ရှိနေပါသေးတယ် နင်းနင်း ရေ။
အင်တာဗျူး သမား ကို ပြန်ပြီး အင်တာဗျူးကြည့်ပါ။
ကွန်းမန့်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ…။
ကျွန်တော်က အောင်မြင်နေတဲ့ လက်တွေ့သမားတစ်ယောက်တော့ဖြင့်
လုံး…၀ မဟုတ်ရပါဘူး ခင်ဗျာ…။
ဟိုမရောက် ဒီမရောက် နဲ့ လမ်းရဲ့သယ်ဆောင်ရာကို
အလိုက်သင့် မျှောလိုက်နေမိသူ တစ်ဦးပါ ခင်ဗျာ…။
မျက်စိပိတ်…၊ နားပိတ်…၊ ခံထားရတဲ့ တပ်မိသားစုတွေရဲ့ ဘ၀ကို
ဂျစ်စူ says: အခုကော
စွဲနေကြတာပါပဲ ကိုဂျစ်စူ ရယ်…။
uncle gyi says: အခုခေတ်တော့ဖုန်းတလုံးနဲ့ပွတ်နေကြတာမြင်မကောင်းဖူး
sorrow says: ချစ်ခင်လေးစားရပါသော အစ်ကိုခင်ဗျာ .မရိုမသေ ..ဆက်သွယ်ပါခင်ဗျ …သတိရလွန်းလို့ ..ထမင်းစားလေးဘာလေးလာရောက်ချီးမြင့်ပါခင်ဗျ…
အချိန်တန်ရင် နောက်တစ်မျိုး ပြောင်းပြီး
black chaw says: @ Sorrow ;
ကိုယ်လည်း သတိရ ပါတယ်ဗျာ။
မားသားကြီးကျန်းမာရေး ကိစ္စ နဲ့ 
ကြုံတဲ့အခါ စားကြသေးတာပေါ့ ညီလေးရာ။
weiwei says: ဒီလိုစာလေးတွေဖတ်ရတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းတွေ ပြန်တွေးမိရင်း ..
သေချာတာတစ်ခုကတော့ ငယ်ငယ်ဘ၀ခံစားချက်တွေကို အတိအကျမမှတ်မိတော့ပေမယ့် အခုအချိန်မှာတွေးလိုက်တိုင်း ငြိမ်းချမ်းသလိုပဲ .. ခေတ်စနစ်တွေကြောင့်များလားလို့ပါ .. အရင်ခေတ်တွေမှာ မပြည့်စုံခဲ့ပေမယ့် အရာရာပြည့်စုံနေသလို ခံစားလို့ရပြီး အခုတော့ အတော်လေးပြည့်စုံနေပါလျက်နဲ့ အမြဲတမ်းလိုအပ်နေသလိုဖြစ်နေတဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့ ..
မပျော်ရွှင် မငြိမ်းချမ်း ပါဘူး။
ကိုထီးသီချင်း လိုများ ဖြစ်နေတာလား မသိ။
အပူအပင် ကင်းတဲ့ ကလေးလေး ဘဝ မို့ 
ကျေးဇူး ပါ မဝေ ရေ။
အောင် မိုးသူ says: အဲ့သည်ခေတ်တွေကို မီခဲ့သေးလို့ ပြန်လည်ကြည်နူးမိ
ကွန်းမန့် လေး ဝင်ရေးပေးသွားတာ
ကျေးဇူး ပါ ညီလေးရေ။
မမချွိ says: ကျောင်းကအပြန် မဂ္ဂဇင်း အသစ်များ အိမ်မှာတွေ့ရတဲ့ အရသာက
အဲဒီလိုအချိန်က ရခဲ့တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမျိုးတွေကို
ခု ဘာရရ သိပ် ဝမ်းသာစရာမဖြစ်တော့တဲ့ အရွယ်မှာတော့ ပြန်တွေးစရာရှိတာတောင် ရတနာတစ်ပါးပါပဲဗျာ။
black chaw says: @ မမချွိ ;
ကျောင်းမှာ အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်လာ ရောင်းတယ်ဗျ…။
၁၅ ပြားပါလည်း ၁၅ ပြားဖိုး ရောင်းပေးပါတယ်…။
အဲဒီလို အရသာ ရှိတာမျိုး ခုအရွယ်မှာ ပြန် ရချင်တာ…။
အဲဒီ အကြောချက် ဆိုတာကြီးကို
ဟိုတုန်းက အရသာ အတိုင်း ပြန်လာကျွေးရင်တောင်
ဟိုတုန်းက ရခဲ့တဲ့ အရသာမျိုး ပြန်ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ထင်ပါရဲ့ဗျာ…။
ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူး ပါဗျာ…။
may july says: ဒီဈေးနှုံန်းတွေ အရဆို ဦးဘလက်နဲ့ အနော်နဲ့က သက်တမ်းသိပ်မကွာဘူးဗျ ..
အလွန်ဆုံးကွာ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်ပဲ .. အိမ်မှု့ကိစ္စတွေတော့သိပ်မမှတ်မိတော့ပါဘူးး .. အငယ်ဆိုတော့ …
ကျောင်းမှာ မာမီပေးတဲ့ တစ်နေ့မုန့်ဖိုး ပိုက်ဆံ ဆယ့်ငါးပြားကို ကပ်စေးနဲ ငါးပြားဖိုးစား ပြီးရင် အသုတ် ငါးပြား ဖိုးဝယ် ကျန်တဲ့ ငါးပြားကို ရေခဲချောင်းစားရတဲ့ အရွယ်လေးကို ပြန်သတိ ရမိနေတယ်ဗျ ..
black chaw says: @ may july ;
ဒါဆို မေဂျူလိုင်က ၄၀ ကျော်ပြီပေါ့..နော့် …။
ပြန်မရတော့တဲ့ လွမ်းစရာ့ငယ်ဘ၀ပေါ့ မေဂျူလိုင်ရေ…။
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးသွားတာ ကျေးဇူး အထူးပါ နော်…။
may july says: ဟုတ် ထိပ်စီးးပြောင်းသွားပီ ….
ရှုးးးတိုးတိုလုပ်ပါဗျ သူများတွေမြင်ကုန်မယ် ..ခိေိ
kai says: သူ့အကြောင်းဖတ်ပြီး မျက်လုံးမှိတ်လိုက်တော့… ကိုယ့်ငယ်ကအကြောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတယ်..။
ငယ်ငယ်က.. မုန့်ဟင်းခါးတပွဲတမတ်နဲ့.. မေမေ့အတွက်ပြေးဝယ်ပေးတာက.. အမှတ်တရ..
ခုတော့.. မေမေလည်းမရှိတော့ပြီ…။ ပြီး ခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်၂၆မှာ.. ဘာလိုလိုနဲ့.. ၄နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီလေ….။
ငယ်ဘ၀ ကိုယ်စီ နှင့် လူသားကြီးများ ပေါ့ သူကြီးရယ်…။
သူကြီး အမေ ဆုံးတာတောင် ၄ နှစ်ရှိသွားပြီ ဆိုတော့
ကွန်းမန့်လေး အတွက် ကျေးဇူး အထူးပါ သူကြီးရေ…။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မျှစ်ကြော် ငယ်ဘ၀ကိုများ ရေးပြသလား အောက်မေ့ရတယ်။ ငယ်ငယ်က အဲဒီအတိုင်း။
black chaw says: @ ၀င့်ပြုံးမြင့် ;
ဖြတ်သန်းမှု တွေ တူကြတယ်ပေါ့ မပြုံး ရေ…။
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ချီးမြှင့် ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ…။
Thint Aye Yeik says: ကျနော်ကတော့ စာကြည့်တိုက်တွေဘက် မရောက်ဖြစ်တာ ကြာပြီ။
တနင်္ဂနွေနေ့လို ရုံးပိတ်ရက် ဖွင့်တဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေ သိထားရင် ပြောပြကြပါအုန်းဗျိုးးးးး
တနင်္ဂနွေလို ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ ဖွင့်တဲ့ စာကြည့်တိုက်ကတော့
ရပ်ကွက် စာကြည့်တိုက်တွေပဲ ရှိလိမ့်မယ် ဗျ…။
ကိုယ်တော့ တကယ် မသိပါဘူး ဗျာ…။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကိုယ့်အကြောင်းပြန်စဉ်းးးစားရင် . . .ပဲဆီ ၃၀ သား ၆၅ ကျပ်ဆိုတာ ပြန်ပေါ်လာတယ် . . . မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပွဲ ၅ ကျပ်လား မသိ . . ဟီး
ပဲဆီ တစ်ပိသာ ၂၀၀ ကျော်ကျော်လေးပဲ ရှိသေးတဲ့ အချိန်ပေါ့လေ…။
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ မွန်မွန် ရေ…။
Ko chogyi says: ဟေ့ လူဂျီး မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ဖတ်ကြည့်တာ ဘာမှ မမြင်ရဘူး
Comment ရေးတာတော့ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ရိုက်တာဗျ
Foolish Girl says: မျက်လုံးမှိတ်ပြီး အိပ်ကြည့်စမ်းပါအချစ်ရယ်…..အဲ